किम जोङकी सुन्दर श्रीमतीका १० रोचक किस्सा, १० लाेभ्याउने तस्विर
पाेखरा १४ साउन- उत्तर कोरियाली सर्वोच्च नेता किम जोङ उन विश्वका चर्चितमध्येका एक नेता हुन् । उनलाई सनकका भरमा काम गर्ने नेताका रुपमा पनि धेरैले चिन्छन् । हुन पनि उनले कतिबेला के गर्ने हुन भन्ने पूर्वानुमान कसैले गर्न सक्दैनन् ।
सायद त्यही कारणले उनी विश्वभर चर्चित छन् । यति मात्र होइन, उनकी श्रीमती री सोल जू पनि कहिले कहीँ चर्चामा आउने गरेकी छिन् । केही वर्षअघिसम्म उनीबारे थाहा नभएका कुराहरु पनि समयक्रमसँगै बाहिर आउँदै गएका छन् ।
री सोल जूबारे यस्ता केही किस्सा छन्, जुन सबैलाई थाहा नहुन सक्छ
१. उनको परिवार सम्भ्रान्त तथा शिक्षित वर्गका हुन
२. उनी निकै महङ्गा सामान मन पराउँछिन्
३. उनले चीनमा सङ्गीतको शिक्षा लिएका थिइन्
६. उनी उत्तर कोरियाकी सबैभन्दा प्रभावशाली तथा शक्तिशाली महिला भने होइनन्
७. उनी ३० वर्ष पनि पुगेकी छैनन्
१०.उनी उत्तर कोरियाली सङ्गीत समूहकी सदस्य समेत रहिसकेकी छिन्